नोभल कोरोना भाइरस के हो?
संक्रमणको जोखिमबाट म कसरी जोगिन सक्छु?
खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा कुहिनो वा कागजी-रुमालले नाक र मुख छोप्नुहोस् र प्रयोग पश्चात तत्कालै त्यसलाई बन्द फोहोरदानीमा फाल्नुहोस
रुघाखोकी वा फ्लुका लक्षण देखिएका व्यक्तिबाट टाढै बस्नुहोस् ।
के मैले (स्वास्थ्यकर्मीहरूले लगाउने) मास्क लगाउनु पर्दछ?
मेरा बालबालिकामा कोभिड-१९ का लक्षण देखिएमा के गर्ने?
के मैले मेरा छोराछोरीलाई विद्यालय जानबाट रोक्नुपर्दछ?
यात्रा गर्दा आफ्नो परिवारका लागि के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्ला?
नियमित अपनाइने यात्रा सम्बन्धी सावधानीहरू बाहेक स्वदेश फर्केपश्चात क्वारेन्टाईन हुन र प्रवेशमै निषेध हुनबाट जोगिन अन्तराष्ट्रिय हवाई यातायात संघको वेबसाईटमा उपलब्ध कोभिड-१९ सम्बन्धी अध्यावधिक सुचना लिनुहोस्।
के गर्भवती महिलाबाट बच्चामा कोरोनाभाइरस सर्न सक्छ ?
कोरोनाभाइरस बाट संक्रमित आमाले स्तनपान गराउनु सुरक्षित हुन्छ ?
अहिलेको समयमा म दुर्व्यवहार, भेदभाव र लाञ्छनाका बारेमा चिन्तित छु। अहिले जे भईरहेको छ, त्यसबारेमा कसरी कुरा गर्ने ?
अहिलेको अवस्थामा तपाईं कोरोनाभाइरसको कारणले चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो। तर भय र त्रासले विद्यमान समस्यालाई झनै जटिल बनाउँछ। उदाहरणका लागि, अहिले एसियाली मुलका मानिसहरूमाथि मौखिक तथा शारिरिक दुर्व्यवहार समेत भएको समाचारहरू आईरहेका छन्।
स्वास्थ्य सम्बन्धी आपतकालीन अवस्था, यसबाट प्रभावित सबैका लागि तनावपूर्ण समय हो। यस्तो समयमा सहि जानकारी लिईराख्नु र एक अर्का प्रति माया र सद्भाव कायम राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। विद्यमान भेदभावलाई बढावा दिने खालको भाषा र शब्दावलीहरूको प्रयोगले मानिसहरूलाई आवश्यक जाँच गराउनबाट निरुत्साहित गर्न सक्छ र उनीहरू तथा उनीहरूका समुदायनै जोखिममा पर्न सक्छन्।
आफ्ना बालबालिका, परिवार तथा साथीभाइसँग कोरोनाभाइरसको बारेमा कुरा गर्दा निम्नानुसार गर्नुहोस:
गर्नुहोस्: कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को बारेमा कुरा गर्नुहोस् ।
नगर्नुहोस्: यो रोगलाई कुनै स्थान वा जाति विशेष सँग नजोड्नुहोस्। याद राख्नुहोस्: भाइरसले कुनै एक जनसंख्या, समुदाय वा जातिलाई मात्र आक्रमण गर्दैन ।
गर्नुहोस्: कोभिड-१९ को संक्रमण भएका”, “कोभिड-१९को उपचार गराईरहेका”, “कोभिड-१९ को उपचार पश्चात निको भईरहेका”, वा “कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण मृत्यु भएका” व्यक्तिहरूका बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
नगर्नुहोस्: यी व्यक्तिलाई ‘कोभिड-१९ को केस’ वा ‘कोभिड-१९ पिडित’ भनेर नभन्नुहोस्।
गर्नुहोस्: मानिसहरूलाई कोभिड-१९ को संक्रमण भएको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
नगर्नुहोस्: कसैले “कोभिड-१९ संक्रमण गराएको”, “कोभिड-१९ सारेको” वा “कोभिड-१९ फैलाएको” भनेर नभन्नुहोस् किनभने त्यसो भन्दा उनीहरूले नियतवश संक्रमण फैलाएको तथा यो उनीहरूको दोष भएको ईकित गर्दछ।
गर्नुहोस्:तथ्यपरक सुचना तथा सबैभन्दा पछिल्लो आधिकारीक स्वास्थ्य सल्लाहका आधारमा कोभिड-१९ को जोखिमबारे कुरा गर्नुहोस्।
नगर्नुहोस्: अपुष्ट हल्लालाई नदोहोर्याउनुहोस् तथा थप नफैलाउनुहोस्, र “महामारी”, “विश्व-विनास” जस्ता त्रास फैलाउनसक्ने अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दहरूको प्रयोग गर्नुहोस्।
र अन्तमा यस रोगको रोकथामका प्रभावकारी विधिहरू - जस्तै साबुन पानीले हात धुने तरिका आदिलाई विशेष महत्व दिई सकारात्मक तवरले कुरा गर्नुहोस्। धेरैजसो मानिसका लागि यो रोगको सामना गर्न सम्भव छ। आफु, आफ्नो परिवार तथा अत्यन्तै जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित राख्न सरल उपायहरू द्वारा सम्भव छ।